Maxaa loo joojiyay Siminaarkii xisbiga Wadajir uga socday magaalada Muqdisho? – Bandhiga
Maxaa loo joojiyay Siminaarkii xisbiga Wadajir uga socday magaalada Muqdisho?
Hogaamiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame, ayaa sheegay in Ciidamada Booliska Somaliya ay ka joojiyeen Siminaar uu ku qabsan lahaa Hoteelka Maka AlMukarama ee ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, ayuu ku sheegay in amar ka soo baxay xafiiska Madaxweyne Farmaajo lagu xiray Hotel Makka Al-mukarama oo maalmahan uu ka socday simanaar sare loogu qaadayo aqoonta iyo wacyiga siyaasadeed ee Kaadirka Xisbiga Wadajir.
“Waxaa amar ka soo baxay xafiiska Madaxweyne Farmaajo lagu xiray Hotel Makka Al-mukarama oo maalmahan uu ka socday simanaar sare loogu qaadayo aqoonta iyo wacyiga siyaasadeed ee Kaadirka Xisbiga Wadajir, Booliska Soomaaliyeed ee loogu tala galay in ay nabadgelyada ilaaliyaan, sharcigana dhowraan ayaa caburin, cagajuglayn iyo cadaadis dano shakhsi ah loo adeegsaday. Waxaa ii muuqata in kooxda talada haysataa aysan lahayn aragti iyo kir ay dadka ku qanciyaan, waxay naf bideen qori iyo qalalaase”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur Warsame .
Sababaha ugu waa weyn ee loo joojiyay kulanka ayaa ah in madaxda dowladda Federalka aysan maqlin eedeyn iyo dhaleeceen ka imaaneysa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur.
Majirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha amaanak ee dowladda oo la xiriirta cabashada Warsame, Iyadoo Sanadkii 2017 dowladda Somaliya ay soo xirtay Siyaasiyagan Mucaaradka ah, marki xili habeen ah weerar lagu qadaay Hoygiisa oo ku dhow garoonka Muqdisho.
Dowladda Somaliya, ayaa sidoo kale sanadankii ina dhaafay ee 2018 ka joojisay Siyaasigan SHirar iyo Banaanbaxyo uu qabsan lahaa.